Voalohany aty Afrika izao i Gabon eo amin’ny PIB isam-batan’olona, mihoatra an’i Botswana mpanankarena voalohany hatramin’izay. Fahamaroan’ny fanavaozana natao manamora ny fandraharahana sy fanajana ny tontolo iainana no nampiakatra an’i Gabon. Araka ny fanadihadiana nataon’ny Banky iraisam-pirenena, 7000 dolara mahery isam-batan’olona ny PIB isam-batan’olona taona 2021 ity any Gabon, 6711 dolara any Botswana. Marihina anefa fa i Gabon no kely velarana indrindra no vitsy mponina indrindra aty Afrika, miisa latsaky ny 1,5 tapitrisa.
Manana ny toerany ankehitriny i Namibie, fahadimy aty Afrika sy faha-7 eran-tany amin’ny fitrandrahana diamondra. Voalohany koa ity firenena ity aty Afrika eo amin’ny fitrandrahana uranium, faha-4 eran-tany. Saika miondrana any Chine ny ankamaroan’ireo harena an-kibon’ny tany avy any Namibie ireo, manatombo avo roa heny no ho ny avy any Niger, manondrana uranium any Frantsa, Kanada, ary Kazakhstan. Na izany aza, mandalo krizy ara-toekarena goavana i Namibie, misy fiantraikany amin’ny isam-batan’olona.
Roa taona nisesy, 2020 sy 2021, latsaka ambany be ny vidin’ny solika fa hisy fisondrotana ihany amin’ny taona 2022. Hahita tombony be indrindra ireo firenena arabo any amin’ny tapany avaratra mpanondrana solika (Maroc, Tunisie, Algerie, Libye). Tamin’ny telo volana voalohany fiandohan’ity taona ity, efa tafakatra 60 dolara ny baril solika, ary mbola hiakatra amin’ny taona 2022, noho ny fanarenana ny seha-pihariana maro. Ho hita aty Afrika ny fiarenenan’ny toekarena amin’ny 2022, araka ny tomban’ny FMI.